Sida Lagu Garto Beenaalaha… bal tijaabi xeeladdan loo adeegsanayo xarafka ‘Q’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Adigu ma waxaad tahay qof daacad ah?
Marka laga hadlayo la dhaqanka bulshada, waxaa mararka qaar jirta in isticmaalka beenta – ama in ugu yaraan waxyaabaha qaar xaqiiqdooda la qariyo – ay tahay arrin aan ka siman nahay dhammaanteen.
Inkastoo aannaan aad ugu fiicneyn sida lagu garto qofka beenta sheegaya, haddana waxaa laga yaabaa inay jiri karto xeelad sahlan oo kaa caawin karta inaad fahantid dadka beenaaleyaasha ah ee nagu dhex jira.
Lucy Cooke, oo ah qoraa isla markaana ku takhasustay xannaaneynta xayawaannada, ayaa ogaatay in boqortooyada xayawaannada ay aad ugu badan tahay xeeladda la xiriirta qarinta runta – bani;aadankuna ay sidoo kale yihiin.
Runta ayaan musuqmaasuqnaa si aan nabadda u ilaalinno
Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in aysan dantaada ku jirin inaad mar kasta si daacad ah wax u sheegto ama u dhaqanto
Badanaa, erayga “been” waxaan micnihiisa u naqaannaa qof nagu khiyaanaya hadal ama ficil. Laakiin xaqiiqdii, waxay taasi mararka qaar ka buuxdaa wada sheekeysigeenna caadiga ah, sababtoo ah marka aan hadleyno ma sheegno wax walba oo aan niyadda ku heyno ama aan dhab ahaan ula jeedno waxa aan sheegeyno.
Bal ka warran haddii marka aad qof la sheekeysaneysid uu kuu sheegi lahaa wax walba oo uu kaa aaminsan yahay? Waxay noqon lahayd wax aan loo dulqaadan karin.
Xitaa haddii aadan ka helin habka uu qof u soo jartay timaha, ma dhacdo inaad afka ka sheegtid.
Saddex meelood hal meel oo naga mid ah been ayey sheegaan maalin walba
“Qiyaastii saddex meelood hal meel oo ka mid ah dadweynaha waxay maalin kata sheegaan been aad u weyn”, sidaas waxaa yiri Richard Wiseman, oo ah aqoonyahan ku takhasusay Cilminafsiga.
Haddana sidaas oo ay tahay cilmibaaris dhawaan la sameeyay ayaa muuhisay in boqolkiiba shan ka mid ah dadweynaha ay sheegaan inaysan waligood been sheegin ama khiyaano sameynin.
Sidaas darteed waxay u muuqataa in dad badan oo naga mid ah ay runta qariyaan marka la sameynayo daraasad sidaas wax u fashili karta.
Inaan been sheegno aad bay noogu sahlan tahay laakiin waxaa adag inaan garanno qof been sheegaya
“Inta badan waan ku dagdagnaa, aad bayna noogu fududdahay inaan been sheegno, balse waxaa nagu adag inaan fahanno qof runta naga qarinaya. in kastoo aan ku fiican nahay been sheegistana iskama ilaalin karno beenaaleyaasha”, ayuu yiri Richard.
Waxay nala tahay inaan garan karno qofka na khiyaanaya, laakiin marka aad labo qof meel geyso, oo aad u daarto cajalad laga duubay labo ruux oo midna uu run sheegayo midna been sheegayo, ka dibna labadii qof ee daawatay aad weydiiso inay kala sheegaan kan beenta sheegay iyo kan runta sheegay – qiyaastii 50% oo kaliya oo ka mid ah dadka ayaa si sax ah u heli kara jawabta.
Xitaa dadkaas waxaa ka mid ah booliska, qareennada iyo waliba garsooreyaasha maxkamadaha.
Si aad u garato qof been sheegaya, adeegso dhagahaaga, laakiin ha adeegsanin indhahaaga
Sababta aannaan ugu fiicneyn inaan runta iyo beenta kala garanno waa inaan nahay dad xoogga saara waxa u muuqda uun.
Qeybo aad u waaweyn oo ka mid ah maskaxdeenna ayaa u go’an inay ka shaqeeyaan qiimeynta waxyaabaha indhaha u muuqda.
Sidaas darteedna waxaan isku daynaa inaan annagoo taas adeegsaneyna garanno qofka beenta sheegaya.
Si aad u ogaatid inaad beenta ku fiican tahay ama aad ku liidatid, wajigaaga ku qor xarafka Q
Tan waxaa la yiraahdnaa Tijaabada “Q” waxayna sameynteeda qaadaneysaa qiyaastii shan ilbiriqsi.
Fartaada suulka ku xigta ee ku taalla gacanta aad aadka u adeegsatid ku qor xarafka Q adigoo ku sameynaya wajigaaga.
Su’aashu waxay tahay, dhankeed u jeedisay seynta yar ee xarafka, ma waxaad ku dul qortay ishaada bidix mida ishaada midig?
Haddii aan si kale u dhigno, xafarka Q ma waxaad u qortay si haddii qofka ku hor taagan uu eego ay ugu muuqaneyso sida saxda ah, mise waxaad u qortay si ay dhankaaga kaliya uga saxan tahay?
Sheekadan micnaheedu waa in haddii aad seynta xarafka Q dul saartay ishaada bidix – oo markaas ay dadka dhankooda ka toosan tahay – markaas waxaad ka fikireysaa sida ay dadka u qaadan karaan hadalkaaga, waxaadna noqon lahayd qof beenta ku fiican.
Laakiin haddii aad dul saartay ishaada midig – waxaad adduunka u aragtaa sida uu adiga uun kuula muuqdo – waxaadna damacsan tahay inaad xoogaa daacadnimada badisid.
Khiyaanadu waxay ka jirtaa meel kasta. Marka aan eegno dunida dabiiciga ah, xayawaannadu xitaa waxay isku khiyaanaan si joogto ah.
Tags: Sida Lagu Garto Beenaalaha... bal tijaabi xeeladdan loo adeegsanayo xarafka 'Q'
Next post Maxay Tahay Sababta Afrika ay "u joojineyso mid ka mid ah cuntooyiinka loogu jecel yahay?"
Previous post Waa Maxay Eerno Oo Afka Qalaad Loo Yaqaano Hernia?.